သမ္မတဘိုင်ဒန်က Coronavirus ကာကွယ်ဆေးတွေအတွက်လမ်းလျှောက် ၀ င်ရောက်ဖို့ရာထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆေးဆိုင်တွေကိုဖွင့်လှစ်နေတယ်၊ ​​pop-up၊ mobile ဆေးခန်းများ၊ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့တွင်အမေရိကန်အရွယ်ရောက်သူ ၇၀% အားအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကာကွယ်ဆေးထိုးရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။
နေ့လည်ခင်းတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင်သမ္မတကစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ရန်ပုံငွေများထပ်မံပေးအပ်ရန်စီစဉ်နေသည်။အသိအမြင်မြှင့်တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများသည်ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်တွန့်ဆုတ်နေသူများကိုမိမိတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်အခြားသူများ၏ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်စေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကာကွယ်ဆေးများများပြားနေသော်လည်းadminပြီလလယ်တွင်အမြင့်ဆုံးရောက်ရှိချိန် မှစ၍ နေ့စဉ်အုပ်ချုပ်သည့်ကာကွယ်ဆေးအရေအတွက်မှာထက်ဝက်ခန့်ကျဆင်းခဲ့သည်။
herd immunization - ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ရန်အတွက် host များမရှိခြင်းကြောင့်ယခုအချိန်တွင် -
အကယ်၍ လူ ဦး ရေ၏ ၇၀ မှ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်ကာကွယ်ဆေးထိုးခံပါကရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းသည်နိမ့်ကျပြီးပုံမှန်ဘ ၀ ကိုရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းအကြီးတန်းအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိများကပြောကြားသည်။ လွတ်လပ်ရေးနေ့မတိုင်မီခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်လူ ဦး ရေသန်း ၁၆၀ ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးရန်သမ္မတကတောင်းဆိုလိမ့်မည်။ တနင်္လာနေ့အထိအမေရိကန်လူမျိုး ၁၀၅ သန်းကျော်သည်အပြည့်အဝကာကွယ်ဆေးထိုးထားပြီးအရွယ်ရောက်သူအနည်းဆုံး ၅၆% - (လူပေါင်း ၁၄၇ သန်း) သည်အနည်းဆုံးကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးကိုရကြသည်။ ဤသည်အားကြီးသောမှလှူဒါန်းခဲ့သည်အသက်အရွယ်အုပ်စုအားလုံးတွင်ရောဂါကူးစက်မှု၊ ဆေးရုံတင်ကုသမှုနှင့်သေဆုံးမှုများကျဆင်းနေသည်ဟုဖက်ဒရယ်အရာရှိများကပြောသည်။ ကာကွယ်ဆေးရရှိနိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့အိမ်ဖြူတော်ကအကြံပေးသည်မှာအပတ်တိုင်းအပြည့်အဝကာကွယ်ဆေးခွဲဝေမှုကိုအမှာစာမထားလျှင်၊ ဆေးများသည်ဖက်ဒရယ်ရေကန်သို့ပြန်သွားမည်၊ အမျိုးသားနှင့်ဖက်ဒရယ်အာဏာပိုင်များ။ တစ်ပတ်စာထောက်ပံ့ကြေးအပြည့်အ ၀ မရရှိသေးတဲ့နိုင်ငံတွေကိုလာမယ့်သီတင်းပတ်မှာအပြည့်အဝတောင်းခံနိုင်တဲ့အတွက်ဒဏ်ငွေချမှတ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဝါရှင်တန်ပို့စ်သတင်းစာ၏
သို့သော်၎င်းသည်ဖက်ဒရယ်အစိုးရကသူတို့ကိုခွင့်ပြုထားသည်ထက်ဆေးများပိုမိုသုံးစွဲနိုင်သောပြည်နယ်အချို့ကိုကူညီလိမ့်မည်။သူတို့ရဲ့လူ ဦး ရေအရသိရသည်ue။ ယခုအခါ၎င်းတို့အားအစိုးရကအစိုးရထံအပ်ငွေထက် ၅၀% ပိုတောင်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ယခုအချိန်အထိအိမ်ဖြူတော်အရာရှိများသည်နေထိုင်သူများပိုမိုဆန္ဒရှိလိုသည့်မြို့ပြသို့မဟုတ်ချမ်းသာသည့်ဒေသများအတွက်အကျိုးရှိရန်ကျေးလက်ဒေသများသို့မဟုတ်မတတ်သာသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများဆုံးရှုံးသွားမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးပိုမိုမြန်ဆန်သောပြည်နယ်များသို့ဆေးများကိုလွှဲပြောင်းရန်ဆန္ဒမရှိကြပါ။ ကာကွယ်ဆေးထိုး။ ဒါပေမယ့်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းကာကွယ်ဆေးထိုးနှေးကွေးမှုနဲ့အတူ၊ အာဏာပိုင်များကအသုံးမပြုတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကိုတစ်ပတ်ကိုလွှတ်လိုက်ရင်သာတူညီမျှစိုးရိမ်မှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေမှာမဟုတ်ဘူးလို့တာဝန်ရှိသူများကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အချို့သောအစိုးရအရာရှိများကအပြောင်းအလဲအတွက်တိုက်တွန်းနေကြသည်။
2021-06-14 00:03:28 | WE ။
Mass Pack, Provincetown ရှိကျောက်ပုစွန်ရေငုပ်သူ Michael Packard သည်သောကြာနေ့မနက်ခင်းတွင်ဝေလငါး၏ပါးစပ်၌မိမိကိုယ်ကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်ထွက်ပေါ်လာသည်။...
သောကြာနေ့ညနေတွင်ပစ်ခတ်မှုတွင် ၁ ဦး သေဆုံးပြီး ၇ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်
2021-06-13 23:06:55 | ငါတို့...
သောကြာနေ့ညဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၊ ဆာဗန်နာတွင်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက် ၂၀ အရွယ်လူတစ် ဦး သေဆုံးပြီး ၇ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုဒေသခံရဲကပြောကြားခဲ့သည်။...
တက္ကဆက်ပြည်နယ်တွင်သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ၁၄ ဦး ဒဏ်ရာရ ပြေးအပေါ်သံသယရှိသူ
2021-06-13 22:47:44 | ငါတို့...
စနေနေ့အစောပိုင်းတက္ကဆက်ပြည်နယ် Austin မြို့လယ်တွင်လူနှစ် ဦး တစ်ယောက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူ ၁၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုရဲကပြောကြားခဲ့သည်။...
2021-06-13 21:12:04 | ငါတို့...
ယခင် Pulse နိုက်ကလပ်၏ပိုင်ရှင် Barbara Poma သည်အမေရိကန်သမိုင်းတွင်အဆိုးရွားဆုံးသောပစ်ခတ်မှုတစ်ခု၏ ၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင်အိပ်မက်ဆိုးများပိုမိုရိုက်ကူးခဲ့သည်။...
ကာလီဖိုးနီးယားရေကန်၏အောက်ခြေတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောလေယာဉ်တစ်စင်းသည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုမှဖြစ်နိုင်သည်
2021-06-13 21:10:35 | ငါတို့...
ရေအောက်စူးစမ်းရေးကိရိယာများကိုစမ်းသပ်လုပ်သားများကကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Folsom ရေကန်တွင်ရေအောက်နက်ရှိုင်းသောလေယာဉ်ငယ်တစ်စင်း၏အပျက်အစီးများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး၎င်းတို့သည်အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ်လေယာဉ်နက်နဲသောအရာတစ်ခုအားဖြေရှင်းရန်ဖြစ်နိုင်သည်။...
Austin ပစ်ခတ်မှု - Austin တွင်ဖမ်းဆီးမှု၊ Texas ပြည်နယ်၊ လူ ၁၄ ယောက်ဒဏ်ရာရသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပစ်ခတ်မှု
2021-06-13 21:09:10 | ငါတို့...
တက္ကဆက်ပြည်နယ် Austin မြို့လယ်တွင်တစ်ညတည်းပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူ ၁၄ ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။...
လေယာဉ်မယ်အားခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လေယာဉ်အမှုထမ်းအားထိန်းသိမ်းထားကြောင်း Delta မှပြောကြားခဲ့သည်
2021-06-13 21:05:02 | WE ။
တစ်စုံတစ် ဦး ကပြောကြားရာတွင်သူခိုးသည်ဗီဒီယိုခွေ၏ဗီဒီယိုသည်လူအများအပြားအားမြေပြင်ပေါ်ရှိလူတယောက်နှင့်ရန်တွေ့ခြင်း၊ အနိမ့်ထားပါ။...
တက္ကဆက်ပြည်နယ်တွင်သေနတ်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ၁၄ ဦး ဒဏ်ရာရ ပြေးနေဆဲသံသယရှိသူ
2021-06-13 21:03:38 | ငါတို့...
ဆာဗားနားပစ်ခတ်မှု - ၁ ဦး သေ၊ ၇ ယောက်သောကြာနေ့ညနေ
2021-06-13 20:20:54 | ငါတို့...
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၊ ဆာဗာနာတွင်သောကြာနေ့ည၌သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက် (၂၀) ​​အရွယ်လူတစ်ယောက်သေဆုံးပြီး (၇) ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟုရဲကပြောကြားခဲ့သည်။...
2021-06-13 19:06:45 | ငါတို့...
Springfield, Illinois လူတစ်ယောက်ကသူမနဲ့သမီးရဲ၏ပြာများပါ ၀ င်တဲ့အသေးငယ်တဲ့အမှုန့်ကိုဖွင့်ပြီးသူမကိုယာဉ်ကြောရပ်တန့်နေစဉ်အတွင်းသူမကို“ ရှုတ်ချဂုဏ်ဖျက်ခြင်း” အတွက်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။...
ဂျော်ဂျီယာနှင့် alabama တွင်ပစ်ခတ်မှုများ - ၂၄ နာရီအတွင်း ၃ ကြိမ်တွင်ဖမ်းဆီးရမိသည်ဟုသံသယရှိသည်
2021-06-13 17:10:24 | ငါတို့...
အသက် ၃၉ နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ် ဦး ကို ၂၄ နာရီအတွင်းသီးခြားပစ်ခတ်မှုသုံးခုဖြင့်စနေနေ့က Ga ။ Metro areaရိယာရှိကိုလံဘတ်စ်တွင်လူငါး ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။...
အမေဇုံ၊ ဂူဂဲလ်အမှုဆောင်အရာရှိများသည်အမေရိကန်ကို ဦး ဆောင်သည်။ အထက်လွှတ်တော်လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုလက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကြားနာမျက်မြင်သက်သေများ၏စာရင်း
2021-06-13 17:06:45 | ငါတို့...
Alphabet's Google (GOOGL. O) နှင့် Amazon. com (AMZN. O) မှအမှုဆောင်များသည်လာမည့်သီတင်းပတ်တွင်အထက်လွှတ်တော်တရားစီရင်ရေးကော်မတီ၏လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုဆပ်ကော်မတီရှေ့တွင်ကြားနာခြင်းအတွက်မျက်မြင်သက်သေစာရင်းကိုထိပ်ဆုံးမှ ဦး ဆောင်ကာစပီကာထုတ်လုပ်သူ Sonos Inc (SONO. O) မှအမှုဆောင်အရာရှိတစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ နည်းပည...
သိပ္ပံပညာရှင်များကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၉ သန်းကထူးဆန်းသောမျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်မှုဖြစ်သည့်ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ရေနက်များ၏ ၉၀% သည်သေဆုံးခဲ့သည်
2021-06-13 16:58:11 | ငါတို့...
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၉ သန်းခန့်ကကမ္ဘာ့သမုဒ္ဒရာသို့သွားသောငါးမန်းများ၏ ၉၀% ခန့်သေဆုံးခဲ့သည်။...
2021-06-13 15:52:10 | ငါတို့...
Deirdre Lawson သည်ကူးစက်ရောဂါမဖြစ်ပွားမီကအကောင်းဆုံးဘဝနေထိုင်ခဲ့သည် - အကယ်၍ သူမခရီးမသွားလျှင်၊ ဖျော်ဖြေပွဲများ၊ ရုပ်ရှင်များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအခြားလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။...
2021-06-13 15:05:35 | ငါတို့...
Stephanie ဟူစတန်သည်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်က Dallas ရှိလမ်းများပေါ်တွင်သေနတ်ဖြင့်ပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည့်သူမ၏လိင်သမီးနှင့်စကားပြောရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာခဲ့သည်။ သို့သော်ယခုသူမသည်အခြား trans trans အမျိုးသမီးများအားအလားတူကံကြမ္မာကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီရန်ဆုံးဖြတ်သည်။...